Maalinta: Maarso 26, 2019
Dib-u-dhiska waddada Altınbeşik
Dawladda hoose ee Antalya, dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyaha ah ee ku qulqulaya xaafadda Ibradi Productlu Altinbesik godka waa la cusbooneysiinayaa. Ammaan iyo raaxo leh jidadka cidhiidhiga ah ee khataraha leh ee 5 km [More ...]
TOPÇA Iskuduwaha Gawaarida badan wuxuu u furan yahay gaadiidka baabuurta
Mid ka mid ah mashruucyada gaadiidka cusub ee 12, TOPÇA Multi-Storey Junction ayaa loo furay taraafikada gawaarida. Fatih Pistil wuxuu sharxay in shaqooyinku ay ku dhow yihiin inay ku dhammaystiraan buundada 29 [More ...]
Guddoomiyaha Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka Veda
Duqa Magaalada Kayseri ee Magaalada Muusigga Mustafa Celik, xarumaha dadweynaha iyo ururada, iyo sidoo kale unugyada adeegga magaalooyinka waaweyn ayaa iyaguna booqashooyin macangag ah ku taga. Wareegtadan dhexdeeda, Duqa Magaalada Çelik wuxuu booqday Gaadiidka A.Ş. [More ...]
Maalgelinta Gaadiidka ee Boosaaso sii wad
Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa waxay sii wadaysaa maalgashiyada gaadiid ee degmada 17 ee magaalada iyadoo hadafku yahay magaalo si fudud looga heli karo. Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktaş wuxuu sheegay inay sii wadaan shaqadooda dhamaan degmooyinka magaalada. [More ...]
Qaybta Gawaarida Gaashaandhigga R & D
Si loo qiimeeyo waaxda baabuurta marka loo eego saadka, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la fiiriyo tirooyinka qeybta gawaarida. Falanqaynta saxda ah ee ka tarjumida isbadalka dhaqaalaha iyo isbadalka heerarka sarrifka ee qeybta gawaarida, gaar ahaan wixii ka dambeeya May 2018 [More ...]
Qorshaha OSTIM ee Kooxda Kumbuyuutarka
Iyada oo ay hogaamineyso howsha Kooxda Xukunada ee Bixinta Zonguldak, ayaa Zonguldak, Karabuk iyo Bartin, waftiga, qeybaha bulshada iyo aqoonyahanada, waxay heleen xog kusaabsan kooxaha kujira OSTIM. Gudoomiyaha OSTİM Orhan [More ...]
International Rail, Light Rail iyo Logistics Exhibition - kaliya oo 3 weyn ee adduunka ee Eurasia Rail Turkiga. carwada tareenka iyo carwada fudud ee 10-12 April si ay albaabkeeda ugu furto booqdayaasha ku sugan Izmir ee 2019 [More ...]
Maareeyaha Guud ee Arikan booqashadiisa Koçbay
Maareeyaha TCDD Gaadiidka Inc. General Erol Arikan, Mehmet ALTINSOY iyo Logistics Department of Press iyo Consultant Xiriirka Dadweynaha Ahmet QIIQ la TCDD xnumx.bölg Agaasimaha Selim booqday Koçbay. [More ...]
Wargayska Bild am Sonntag ayaa sheegay in dawlada Jarmalku ay isku diyaarineyso inay maalgashi ku sameyso 10 bilyan yuuro kaabayaasha tareenka ee soo socda 50 sanadle ah Waxaa la soo wariyay in Jarmalku ay ku maalgelin doonaan 10 bilyan euro kaabayaasha tareenka ee xiga 50 sanadkii. [More ...]
Dawlada Hoose ee Erzincan waxay sameysay wado gaar ah oo loogu talagalay dadka xiiseeya ciyaaraha isboortiga. Kuwa xiiseeya Adrenaline waxay ka soo muuqan doonaan goob xiran oo wata gaadiidkooda khaaska ah. Toddobaadkan dhammaaday, degmada Erzincan [More ...]
Khatarta Khatarta ah ee Hacimusa way baaba'aan
Degmada Manisa Magaalo, Saruhanli oo ku taala albaabka Hacimusa Neighborhood waxay fulinayaan dayactirka iyo faafinta shaqada ee foosha xun. Hawlaha la qabtay si loo xaqiijiyo badbaadada muwaadiniinta iyo hantida waddada wadada ayaa baabi'inaysa khatarta khatarta leh. [More ...]
Gawaarida basaska ayaa lagu hagaajiyay Gordes
Waaxda Gaadiidka ee Dawlada Hoose ee Manisa, oo fulisay dayactirka joogsiga basaska xaafadaha looga baahan yahay Manisa oo dhan, waxay gaysay joogsiyo cusub iyo casri xaafadaha Gördes. Shaqo joogto ah oo waafaqsan baahiyaha muwaadiniinta [More ...]
Mashruucyada Baaskiilada waxay bilaabeen Mashruuca SAKBIS
Kulamada Baaskiillada ayaa ka bilaabmay Mashruuca Bikeega Smart, kaas oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya si kor loogu qaado isticmaalka baaskiillada magaalada. Pistil wuxuu yidhi, bisiklet Kooxaheennu waxay bilaabeen inay ku sii daraan baaskiiladaha saldhigyada baaskiilka ee caqliga leh. Marka la dhammeeyo baaritaanka jeegaga [More ...]